Iyi vhezheni yakaderedzwa inoderedzwa kuberekwa kwaViña Pomal muna1908, ichibatana neyevhezheni ye 2010, mavheti epamberi muBodegas Bilbaínas uye anokwanisa seakanakisa neConsejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Iyi vhezheni yakasarudzika ndiyo mhedzisiro yekusarudzwa kwemabhagetsi makumi mashanu neshanu akagadzirwa naAlejandro López, oenologist weBodegas Bilbaínas. 106% Tempranillo, 90% Grenache uye 5% Graciano, vane makore makumi maviri nemwedzi makumi maviri muFrench uye American oak mapipa. Maitiro echitambi akawana chakafanana Bilbao bhuruu ruvara, iro guta rinopa zita raro kuna Bodegas Bilbaínas.
Kutungamira kwakakwana necasseroles, nyama yakanakisa uye yakarapwa zvizi.
Cherry-tsvuku neine garnet rim yepakati nepakati kusvika pakadzika.
Spice zvinyorwa zvechinwiwa uye yakasviba ma berries, violets uye fennel. Kumashure mashoma ane zvinyorwa zveokoreti uye huni hwakanaka (musidhari).
Yakarongeka uye inonaka waini nekushingirira kukuru uye chiyero.
Sarudzo yemunhu oga ye winemaker kubva pakati peakanakisisa Viña Pomal waini. Yakanakirwa neyekudhara mbiriso zvimedu pa 28-30 ° C uye yakazara maceration nguva yemazuva makumi maviri nemashanu. Iyo ine makore makumi maviri emwedzi muAmerican (25%) uye French (20%) oak mapipa. Chikamu chimwe chete muzvitatu chembiya nyowani. Pakati peino nguva, nguva nenguva marashi anotibvumidza kujekesa waini kuburikidza nekushamisika zvakasikwa. Mushure mekusaririra barrel, waini yakura makore maviri mubhodhoro isati yaiswa pamusika.
Iyo Viña Pomal estate inofukidza 90 mahekita eminda yemizambiringa. Inowanikwa mudunhu reHaro, uye angangoita makiromita maviri kubva pamawadhi, mune rimwe remataundi akanaka kwazvo anotarisana nerukova rweEbro apo inoyerera ichipfuura neConchas de Haro.
Nzvimbo yedu inowona zvinhu zvakasiyanasiyana zvakasikwa, izvo zvinosiyana zvichienderana nekuumbwa kwevhu uye kuratidzwa kwezuva, uye izvi zvinoreva basa rakaperera mukusarudza homo native nzvimbo. Maitiro edu ehupfumi ndeyekusanganisa pakati petsika tsika dzeRioja uye chaiyo yekumhanyisa waini inokodzera kugadzirwa kuitira kuchengetedza zvisikwa, uye nguva dzose nechinangwa chekuti uwane hwakanyanya mhando.
Iyi vintage yakavezwa neyakaitika yekusanaya kwemvura. Kunaya kwemvura zvishoma kubva munguva yechando zvichienda mberi kwairatidza nzira yechitenderera chose chiri kukura. Minda yedu yemizambiringa muHaro yakabatsirwa kubva kunotonhora mamiriro ekunze uye yakatambura nekukanganisa kwekusanaya zvakanyanya zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo. Mucherechedzo wemvura kushungurudzika mukati memwedzi yekutanga kukohwa kusati kwasvika pakadzika mitengo. Izvi zvakatimanikidza kuti titore shungu yekusarudza, kusarudza imwe nguva chaiyo yekukohwa chiumbwa nedanho.
Muna 2012 takagadzira waini yakarongedzwa nemichero yakawanda uye yakakura mukana wekusakara mumabhomba, kwavanobva anyorova.